Waste Storage At Africa's Only Nuclear Plant Brimming | Myanmar Business Today
HomeBusinessRegionalWaste Storage At Africa's Only Nuclear Plant Brimming
“The Koeberg spent fuel pool storage capacity is currently over 90 percent full. (These) pools will reach (their) capacity by April 2020,” Eskom told Reuters inastatement.
“We haveaticking bomb with high-level waste and fuel rods at Koeberg,” said Makoma Lekalakala, Earthlife Africa’s director.($1 = 14.7075 rand)
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံ Koeberg နယူးလကီးယား စက်ရုံရျိ လောင်စာသိုလှောင်ထားမှုသည် လာမည့် ဧပြီလတွင် သိုလှောင်နိုင်မှု၏ အပြည့်သို့ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်လုပ်ငန်း Eskom က ဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၎င်း၏ လောင်စာ သိုလှောင်ကန်အသစ်များအတွက် အတည်ပြုချက်ရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
တောင်အာဖရိက နိုင်ငံအနေဖြင့် Koeberg ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ သက်တမ်းကို နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ်ခုစာ သက်တမ်း တိုးရန် စဉ်းစားနေရာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှုမြင့်မားသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုလောင်စာစွန့်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်မှုမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသတွင်း စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေသည်။
Koeberg မှာ အာဖရိကတိုက်ရှိတစ်ခုတည်းသော နယူးကလီးယား စက်ရုံဖြစ်ပြီး Cape Town မှ ၃၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိပြီး မဟာဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ဆက်သွသွယ်ထားသည်။
“Koeberg စက်ရုံရဲ့ သုံးစွဲပြီး လောင်စာတွေသိုလှောင်မှုဟာ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ သိုလှောင်နိုင်မှုပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်’’ဟု Eskom က ပြောသည်။
Koeberg စက်ရုံဟာ တစ်နှစ်ကို သုံးစွဲပြီး လောင်စာ ၃၂ တန်ကို ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ နှစ်ထောင်ချီကာ အန္တရာယ်ရှိနေနိုင်သည့် ယူရေနီယံနှင့် ပလူတိုနီယံ‌ပါအတွင် ရေဒီယိုသတ္တိကြွပစ္စည်းများကို ရေအောက်တွင် အေအးခဲလျက် နှစ်ပေါင်း ဆယ်ချီကာ သိမ်းဆည်းထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ကလည်း Eskom သည် Koeberg စက်ရုံ စက်လက် လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် လောင်စာသိုလှောင်ကန်အခြောက်ခုနစ်ခု တည်ဆောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်စွမ်းအင်ကုမ္မ Holtec International ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃ဒသမ၆၀ သန်း ပေးချေခဲ့သည်။
Eskom သည် ယခုအခါတွင် အသုံးမပြုရသေးသော လောင်စာသုံလှောင်ကန်အသစ် ကိုးခုရှိနေပြီး တစ်ခုလျှင် သုံးစွဲပြီးလောင်စာပေါင်း ၃၂ ချောင်း သိုလှောင်နိုင်စွမ်းရှိကာ မကြာမီတွင် နောက်ထပ် သိုလှောင်ကန်ငါးခု ထပ်မံ လွှဲပြေငာ်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၄ ခုနှစ်အထိ ဆက်လက် လက်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် စုစုပေါင်း ၁၄ ခုလိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း Eskom က ဆိုသည်။
Previous articleS.Korea, Japan In Fresh Spat Over Intelligence Deal
Next articleNew Shipping Rules, China Pummel Asian Refinery Profits: Russell